Ankara-Istanbul မြန်နှုန်းမြင့်ရထားလိုင်းကပိုကျိုးသည် RayHaber | raillynews
[20 / 02 / 2020] YHT ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးယာဉ်မီးလျှံမှမီးစက်	54 Sakarya
ပင်မစာမျက်နှာတူရကီဗဟို Anatolia ဒေသကြီး06 တူရကီကတူရကီ-အစ္စတန်ဘူလ်အမြင့်မြန်နှုန်းရထားလိုင်းကိုအတွက်အများကြီးအမှားရရှိသွားတဲ့
05 / 08 / 2014 06 တူရကီ, 34 အစ္စတန်ဘူလ်, ရထားလမ်း, အထွေထွေ, အစာရှောင်ခြင်းရထား, ခေါင်းစီးသတင်း, တူရကီ
တူရကီ-အစ္စတန်ဘူလ်အမြင့်မြန်နှုန်းရထားလိုင်းကိုပိုပြီးဆုံးရှုံးမှုပါလိမ့်မယ်: YHT အာဒိုဂန်လမ်းမပေါ်တွင်ဒုတိယအကြိမ်ကြီးမားတဲ့ sovle ဖွင့်ပွဲလုပ်လေ၏။ Project မှအင်ဂျင်နီယာများ, ဒီပထမဦးဆုံးမတော်တဆမှုဖြစ်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်ပင်ပိုကြီးတဲ့မတော်တဆမှုမှတ်ချက်ချနိုင်ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။
တူရကီ-အစ္စတန်ဘူလ်အမြင့်မြန်နှုန်းရထား (YHT) အကြားသူခရီးသည်မှအိပ်မက်ဆိုးများအပြည့်အဝတညဉ့်ရှိခဲ့ပါတယ်။
နေ့ကိုလညျးတဖနျ YHT ပျက်ကွက်ခဲ့သောလမ်းကိုဖွင့်လှစ်။
အစောပိုင်းညဦးယံ၌တူရကီထံမှထွက် set yht'n များ၏ဦးစီးဌာနဘူတာအရာရှိများ, ကလျှပ်စစ်မီးကြောင့်မိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းသဖြင့်ဖြစ်ပေါ်စေတဲ့ချွတ်ယွင်းမှရပ်တန့်ရန်ဖိအားပေးခံရသည်အဘယ်မှာရှိKöseköyဘူတာရုံကိုပိတ်လိုက်ခဲ့သည့်အခါသူကဆိုသည်။
အချိန် 22.30 အဆိုပါချွတ်ယွင်းဖျက်သိမ်းရေးအားဖြင့်မီးရထားရွှေ့ဖို့အမိန့်ထဲမှာကြားပြောလေ၏။
အစ္စတန်ဘူလ်ကနေတူရကီမှရထားKöseköyအတွက်လိုင်းအတွက်ကြောင့်မရှိခြင်းစွမ်းအင်မှ Izmit ကျင်းပခဲ့သည်။
ဤအတောအတွင်းနာရီစောင့်ဆိုင်းခရီးသည်, က Izmit ဘူတာကနေလေ့လာသင်ယူနှင့်သူတို့၏ကိုယ်ပိုင်အရင်းအမြစ်များကိုနှင့်အတူ၎င်းတို့၏လမ်းအပေါ်ဆက်ပြောသည်။
YHT '' လျှပ်စစ်အမှားထဲမှာအမှားကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့Köseköyနံနက်ဆန့်ကျင် Izmit အတွက်ပြဿနာဖျက်သိမ်းရေး, မနေ့ကအစီရင်ခံခဲ့သည်။
ထိုအခါကDilovasıTavşancılတည်ရှိသောအဆိုပါဓာတ်အားခွဲရုံအတွက် switch ကို ယူ. , ဒါကြောင့်ပင် Izmit KöseköyTavşancılအကြားအကြောင်းကို 30 ကီလိုမီတာအကွာအဝေးမှာစွမ်းအင်အောင်မြင်မရနိုငျသတ်မှတ်ထားသော။
ထို့အပြင်, ဒီအိပ်မက်ဆိုးနှင့် ပတ်သက်. အရာရှိများ YHT ကိုမဆိုမှတ်ချက်အောင်ထံမှမပြောဘဲ နေ. ခံစားခဲ့ရသညျ။
နိုင်ငံတကာစံချိန်စံညွှန်းအရသျောဒါမပြောပါဘူး, ဒါပေမယ့်ငါတို့သည်လည်းရထားအထက်တန်းမြန်နှုန်းရထားကိုယူ။ အလုပ်အကိုင်မတော်တဆမှုယခုအချိန်တွင်အသေးစားယာဉ်မတော်တဆမှုခဲ့ကြသည်။
အဆိုပါသတိပေးချက်များကြွင်းသောအရာထဲကနေလိုင်း activated ခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါအမြင့်မြန်နှုန်းရထားနှင့်အတူမိုဘိုင်းဖုန်းအဆက်အသွယ် expedition လိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့်လည်းသတိပေးချက်များစကားကိုနားမထောင်ကြဘူး။ "
3 ။ ဒါဟာလေဆိပ်ပြောင်းရွှေ့ရန်စစ်အစိုးရလုပ်ငန်းစဉ်တစ်တစ်မှေးအိပ် MI ဖြစ်သွားမလဲ
အဆိုပါ EIB ပိုပြီးအစ္စတန်ဘူလ်-တူရကီအထက်တန်းမြန်နှုန်းရထားလိုင်း 200 ယူရိုသန်းထောက်ပံ့နေသည်
Nevşehirနှင့် Antalya အကြားရှိမြန်နှုန်းမြင့်ရထားလမ်းစီမံကိန်း…
Channel ကိုအစ္စတန်ဘူလ်, အစ္စတန်ဘူလ်အတွက်ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာအာမခံဖြစ်လာကြသနည်း
၀ န်ကြီး Turhan: အကယ်၍ ရုပ်သံလိုင်းကိုအစ္စတန်ဘူလ်မှာမလုပ်ဘူးဆိုရင်ဒါကကျွန်တော်တို့ကိုဖိအားပေးလိမ့်မယ်
Ankara-Konya မြန်နှုန်းမြင့်လိုင်းစီမံကိန်း ၅ ၏နယ်ပယ်အတွင်း
TCDD Ankara-Konya မြန်နှုန်းမြင့်လိုင်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုစီမံကိန်း၏ ၅% မှာ…
TCSD သည် Ankara-Istanbul မြန်နှုန်းမြင့်စီမံကိန်း၏နယ်ပယ်အတွင်း၌ Ankara ကိုပြီးစီးခဲ့သည်
cable ကိုကားတစ်စီး၏ဆောက်လုပ်ရေးဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသောတိုက်ရိုက် Urla တပ်ဆင်ခဲ့သည်
World Motocross Championship Motobike 2020 မှစတင်မည်
တူရကီကနေ Corona Virus အားကြောင့် Volkswagen ကနှင့် Peugeot အပိုင်း receiver
Electric Scooter သည်လူတိုင်းအတွက်အထောက်အပံ့ကိုစတင်စုဆောင်းခဲ့သည်